बेर्नाबेउमा अजाक्सको सनसनीपूर्ण जित, रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिगबाट आउट ! « Postpati – News For All
बेर्नाबेउमा अजाक्सको सनसनीपूर्ण जित, रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिगबाट आउट !
फागुन २२, काठमाडौं । कीर्तिमानी १३औं तथा पछिल्ला तीन सिजन लगातारको विजेता स्पेनिस रियल मड्रिड युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम १६ बाटै आउट भएको छ । नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगको खेलमा डच क्लब अजाक्ससँग १–४ को लज्जास्पद हार व्यहोर्दै रियल प्रतियोगिताको अन्तिम १६ बाटै आउट भएको हो ।
यससँगै लगातार चौथोपटक उपाधि जित्ने रियलको सपना पनि चकनाचुर भएको छ । रियललाई यसपटक पनि यस प्रतियोगितको उपाधि दाबेदार टिम मानिएको थियो ।
यसअघि अजाक्सको घरमा भएको पहिलो लेगको खेल रियलले १–२ ले जितेको थियो । तर, आफ्नो घर सान्टियागो बेर्नाबेउमा भएको दोस्रो लेगको खेलमा पाहुना टोली अजाक्सले रियललाई १–४ को लज्जास्पद हार चखाएपछि अजाक्स समग्रमा ३–५ गोलअन्तरको जितसहित क्वार्टरफाइनल पुग्दा रियल भने आफ्नै घरबाट उपाधि यात्रामा पूर्णविराम लगाउन बाध्य भयो ।
यससँगै रियल सन् २००९ पछि पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ बाटै आउट भएको छ । नत्र यसअघि ऊ कम्तीमा पनि सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । रियलले पछिल्ला तीन सिजन २०१६ यता लगातार यो उपाधि जितेर इतिहास रचेको थियो । यससँगै च्याम्पियन्स लिगमा रियलको दबदबा र प्रभुत्व पनि टुंगिएको छ ।
रियलको घरमा अजाक्सलाई सनसनीपूर्ण जित दिलाउनेक्रममा ४ जना फरक–फरक खेलाडीले गोल गरे । अजाक्सले पहिलो हाफमा २ गोल गरेर दोस्रो हाफमा २ गोल गर्दै १ गोल खाएको थियो ।
उसका लागि खेलको सातौं मिनेटमै हाकिम जियाचले दर्शनीय गोल गरेर सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । उनले दुसान ट्याडिकको पासमा गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि खेलको १८औं मिनेटमा डेभिड नेरेसले उस्तै आकर्षक गोल गरेका थिए । उनले दुसानकै असिस्टमा चिप प्रहार गरी गोल गरेका थिए । यी नै २ गोलको मदतमा पहिलो हाफमा अजाक्सले ०–२ को सहज अग्रता बनाएको थियो ।
पहिलो हाफमै रियलका युवा खेलाडी भिनिसियस जुनियर घाइते हुँदै मैदान छाडेपछि ग्यारेथ बेललाई भित्र्याइएको थियो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किन सुरुबाटै संघर्षरत रियलका अर्का खेलाडी लुकास भासक्वेज पनि हाफमा घाइते भएका थिए । उनको ठाउँमा मार्को एसेन्सियोलाई मैदान छिराइएको थियो ।
रियलले दोस्रो हाफमा केही आक्रामक खेल खेले पनि समयमै गोल गर्न सकेन । सोहीक्रममा उसका लागि खेलको ६२औं मिनेटमा त्यसअघि नै २ असिस्ट गरिसकेका दुसानले टोलीका लागि तेस्रो गोल गरे । उनले डोनी भान डेको पासमा गोल गरेका थिए ।
सो गोल लाइनबाहिरबाट गएर तानेर पास दिएको अवस्थामा गोल भएको थियो । सो गोलमा रेफ्रीले भिएआरबाट हेरे पनि भिएआरले पनि गोल सदर गरेपछि रियललाई ठूलो झट्का लागेको थियो । सोही गोलपछि रियलको खेलमा फर्किने सम्भावना करिब सकिएको थियो ।
त्यसपछि खेलको ७०औं मिनेटमा रियलका सब्सिच्युट खेलाडी एसेन्सियाले गोल गरेर टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए । उनले सर्जियो रेगुइलियोनको पासमा गोल गरेका थिए । सो गोलपछि खेल १–३ मा आयो ।
तर, रियलले गोल गरेको २ मिनेटमै अजाक्सका लागि लासेस स्कोनीले प्रि किकमा आकर्षक गोल गरे । पोस्टको माथिल्लो कुनाबाट उनले हानेको फ्रि किकले सोझै जाली चुमेको थियो । उनको प्रहार रियलका गोलरक्षक थिबाउट कोर्टुवाले रोक्ने कुनै मौका नै पाएनन् । सो गोलपछि रियल खेलमा १–४ ले पछि परिसकेको थियो ।
त्यसपछि बाँकी समयमा दुवै पक्षबाट थप गोल नभएपछि खेल अजाक्सले १–४ ले जित्यो । अघिल्लो लेगको नतिजासमेत गरी अजाक्स समग्रमा ३–५ को जितसहित अन्तिम आठमा पुग्यो ।
सो खेलमा रियल इन्जुरी समयमा १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । उसका खेलाडी नाचो दोहोरों पहेंलो कार्ड खाँदै बाहिरिएका थिए ।